Arsene Wenger oo kalsooni ku qaba inuu Theo Walcott kusii celsho Arsenal. - Caasimada Online
Home Warar Arsene Wenger oo kalsooni ku qaba inuu Theo Walcott kusii celsho Arsenal.
Arsene Wenger oo kalsooni ku qaba inuu Theo Walcott kusii celsho Arsenal.
Arsene Wenger ayaa sheegay inay socdaan wadahadalada heshiis uu ku cusbooneysiinaayo Theo Walcott, laakiin wuxuu qirtay inaysan weli jirin wax heshiis cusub ah.
Walcott ayaa maalmihii dhowaa lala xiriirinaayey inuu u dhaqaaqayo Juventus, tababare Antonio Conte ayaana sheegay inuu la socda xaalka ciyaaryahaka reer England. Liverpool iyo Manchester City ayaa sidoo kale doonaya xidigii hore ee Southampton, kaasoo ku jira sanadkii ugu dambeeyey qandaraaskiisa Arsenal.
Wadahadaladii heshiis loogu dheereyn lahaa ayaan bilaaban Wenger ayaana kalsooni ku qaba inuu ceshto 23 jirkaan oo ay doonayaan kooxo xafiiltan kala dhexeeyo.
“Wadahadalo ayaa soconaaya laakiin ma jiraan warar ku saabsan.
“Xalkeygu waa mid isku mid ah waana inuu kordhiyaa qandaraaskiisa. Kooxo kale ayaa xiiseynaaya laakiin xaalku waa isku mid.”
Walcott ayaa ka maqnaa kulankii Arsenal ay guul darro 1-0 ah kala kulantay Norwich, wuxuuna sheegay Arsene Wenger inuu kalsooni ku qabo inuu kasoo laabto dhaawaca uu feeraha ka qabo oo soo gaaray xilli uu xulkiisa kala qeyb qaadanaayey isreeb-reebkii koobka aduunka.